Fahendrena – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Fahendrena
1:1 Ny fitiavana ny rariny, hianao izay mitsara ny tany. Eritrereto ny Tompo famindram-po sy mitady Azy amin'ny fahatsoram-po.
1:2 Fa he! Izy hita 'ireo izay tsy maka fanahy azy, nefa manambara ny tenany ho an 'ireo izay manam-pinoana Azy.
1:3 Fa efa nivadika hevitra hisaraka avy amin'Andriamanitra. Fa ny hatsaran-toetra, rehefa pitsapana, mananatra ny adala.
1:4 Fa ny fahendrena dia tsy hiditra any an-mampidi-doza fanahy, na mitoetra amin'ny vatana resy ny fahotana.
1:5 Fa ny fanahy masina ny fampianarana handositra lainga, dia hiala ny tenany amin'ny eritreritra izay tsy manan-tsaina, dia tsy ho tonga rehefa mandresy heloka.
1:6 Fa ny fanahim-pahendrena no ho antra olona, ary tsy hanafaka ny ratsy mpandahateny avy ny lahateniny, satria Andriamanitra no vavolombelona ny toetra, ary tena mpandinika ny fony, ary ny auditor ny teniny.
1:7 Fa ny Fanahin 'ny Tompo dia feno izao tontolo izao, ary izay mirakitra ny zava-drehetra, mitana ny fahalalana rehetra feo.
1:8 Noho izany, Izay miteny zavatra tsy marina tsy afa-mandositra Mariho, ary tsy hisy ny famaizana an'i mandalo fitsarana azy tamin'ny.
1:9 Fa nanontany kosa ho eo an-hevitry ny ratsy fanahy, ny resaka dia tonga koa ny fitoriana ny Andriamanitra, ny famaizana ny helony.
1:10 Fa ny sofina mandre be zotom-po ny zava-drehetra, ary ny korontana ny nimenomenona dia tsy ho nafenina.
1:11 Noho izany, arovy ny tenanareo amin'ny mitaraina, izay Mandray soa na inona na inona, ary hiaro ny lelany amin'ny fanendrikendrehana, satria resaka miafina; fa tsy handeha ho any amin'ny tsy misy, ary ny vava izay lainga mamono ny fanahy.
1:12 Aza fitsarana ho faty noho ny fahadisoan'ny ny fiainanao, na haka ny fandringanana amin'ny asan'ny tananao,
1:13 satria Andriamanitra tsy nanao ny fahafatesana, sady tsy mifaly amin 'ny fahaverezan'ny velona.
1:14 Fa Izy no nahary ny zava-drehetra mba misy, Ary nanao ny jentilisa amin'izao tontolo izao afaka manasitrana azy, ary tsy misy fanafody ny hamongorana ao aminy, na fanjakana ny helo eto an-tany.
1:15 Ny rariny dia mandrakizay sy tsy mety maty.
1:16 Fa ny ratsy fanahy, -tanana ity sy ny teny, efa niantso ny fahafatesana ho azy ireo, ary, esteeming izany ho namana, efa lavo niala ka nanao fanekena tamin'ny fahafatesana, satria mendrika ny handray anjara amin'ny izany.
2:1 Fa izy manao hoe:, Fandresen-dahatra amin'ny tenany diso: "Ny androm-piainany dia fohy sy mandreraka, ary tsy misy fanamaivanana ao anatin'ny fetran'ny olona, ary tsy misy olona no niaiky fa niverina tamin'ny maty.
2:2 Fa teraka avy amin'ny tsy misy, ary rehefa afaka izany isika dia ho toy ny raha ka tsy mbola nisy, satria ny fofonaina ny vavorony dia toy ny setroka, sy ny resaka mamoaka pitik'afo avy ao amin'ny nampientam-po ao am-pontsika;
2:3 noho izany, rehefa faty, ny vatana dia ho lavenona, ary ny fanahintsika dia ho aparitaky toy ny tsio-drivotra malefaka, ary ny fiainana ho levona tahaka ny rahona ny wisp, toy ny zavona dia levona rehefa noroahina 'ny tara-masoandro sy ny hafanana resin'ny.
2:4 Ary rehefa mandeha ny fotoana, dia hitolo-batana ny anarany ny fanadinoana, ary tsy hisy olona hanana fahatsiarovana ny asa.
2:5 Ho an'izao Androntsika izao dia tahaka ny fandehan'ny ny aloka, ary tsy misy afaka manova ny farany, fa ny sonia sy voaisy tombo-kase, ary tsy azo niverina.
2:6 Noho izany, haingana, aoka isika hitandro ny zava-tsoa avy 'izao fotoana izao, ary aoka isika haingana mampiasa ny zava-mandalo, toy ny an'ny tanora.
2:7 Aoka isika po ny tenantsika amin'ny divay sy menaka manitra lafo vidy, ary aoka tsy hisy vonin'ny tanora handalo antsika ny.
2:8 Aoka isika manodidina ny tenantsika amin'ny rosebuds alohan'ny malazo; aoka tsy ho sisa bararata voakasiky noho ny po.
2:9 Aoka tsy hisy olona eo anivontsika ho afa-miala avy amin'ny po. Aoka isika mandao famantarana ny fifaliana na aiza na aiza, fa izany no anjara, ary izany no lahatra.
2:10 Aoka isika mampahory ny mahantra olona marina, ka tsy hamindranao fo ny mpitondratena, ary tsy manaja ny be taona volo fotsin'ny anti-panahy.
2:11 Fa aoka ny hery ho ny lalàn'ny fahamarinana, Fa inona no malemy dia hita fa tsy misy ilàna azy.
2:12 Noho izany, aoka isika hisakambina ny marina, satria tsy misy ilàna azy ho antsika, ary Izy no manohitra ny asa, ary miteny ratsy antsika miaraka amin'ny fahadisoana ara-dalàna, sady mampahafantatra antsika ny fahotana ny fomba fiainana.
2:13 Mampanantena izy fa manana ny fahalalana an'Andriamanitra izy, ary miantso ny tenany ho Zanak'Andriamanitra Andriamanitra.
2:14 Izy no natao eto amintsika, mba hanalana sarona ny tena hevitra.
2:15 Izy no lehibe ho antsika mihitsy aza ny mijery, fa mbola misy aina dia tsy toy ny fiainan'ny lehilahy hafa, ary ny loha tsy mety miova ny lalany.
2:16 Toy ny hoe isika dia raisina amin'ny alalan'ny azy ho tsy misy dikany, ary hijanona tsy ny alehantsika toy ny avy amin'ny fahalotoana; dia aleony ny vao nohamarinina, ary voninahitra fa manana an'Andriamanitra noho ny rainy.
2:17 Andeha hojerentsika, avy eo, raha marina ny teniny, ary aoka isika maka fanahy inona no hanjo azy, ary avy eo dia ho fantatsika izay ny farany dia ho.
2:18 Fa raha izy no tena zanak'Andriamanitra, dia nandray tsara azy sy hanafaka azy amin'ny tanan'ny fahavalony.
2:19 Andeha isika handinika azy amin'ny ompa sy ny fampijaliana, mba ho fantatsika ny fanajana sy hizahanao toetra ny faharetany.
2:20 Aoka isika hohelohiny ho amin'ny fahafatesana mahamenatra indrindra, for, araka ny teniny, Andriamanitra no hikarakara azy. "
2:21 Ireo zavatra ireo dia nieritreritra, ary izy ireo diso hevitra, fa ny lolompo nanajamba azy ireo.
2:22 Ary izy ireo tsy mahalala zava-miafina izay an'Andriamanitra; dia tsy mba hisy ny valisoa nanantena ny rariny, na nitsara ny ilaina ny fanahy masina.
2:23 Fa Andriamanitra no namorona ny olona ho tsy mety maty, ary izy nanendry azy ho tahaka ny endrik'Andriamanitra ny tahaka ny tarehiny.
2:24 Fa noho ny fialonana ny devoly, fahafatesana niditra amin'izao tontolo izao,
2:25 nefa manahaka azy, izay avy amin'ny lafiny.
3:1 Fa ny fanahin'ny marina dia eo an-tànan'ny an'Andriamanitra sy tsy misy fijaliana ny fahafatesana no hametrahany tanana;.
3:2 Eo imason'ny adala, dia toa ho faty, ary ny lasa dia heverina ho fahoriana,
3:3 ary ny handeha hiala amintsika, ny horoahina. Kanefa ireo dia soa aman-tsara.
3:4 Ary na, eo imason'ny olona, dia niaritra fijaliana, ny fanantenany dia tsy fahafatesana feno.
3:5 Nangorohoro ny zavatra vitsivitsy, amin'ny zavatra maro izy ireo, dia ho tsara onitra, satria Andriamanitra efa nizaha ny toetra azy, ary nahita azy mendrika ny tenany.
3:6 Toy ny volamena ao amin'ny lafaoro, Izy no nizahany toetra azy, ary toy ny Famonoana Tambabe niharam-boina, efa nandray azy, ary amin'ny andro hamaliana azy
3:7 izy ireo Hamirapiratra, dia hamongotra ny toy ny pitik'afo eo ny vodivary.
3:8 Izy ireo no hitsara ny firenena ary hitondra ny olona, ary ny Tompo no hanjaka mandrakizay.
3:9 Ireo izay matoky azy, ho fantatrao marina ny fahamarinana, ary izay mahatoky amin'ny fitiavana hitoetra ao aminy, noho ny fahasoavana sy ny fiadanana dia ho an'ny olom-boafidiny.
3:10 Fa ny ratsy fanahy dia ho nofaizana araka ny eritreriny, fa efa tsirambina ny marina sy efa nisintona avy amin'ny Tompo.
3:11 Fa na iza na iza miala fahendrena sy ny famaizana tsy faly, ary ny fanantenana dia foana tsy mitondra fanatitra, ary ny asany tsy misy voany, ary ny asany tsy misy ilàna azy.
3:12 Ny vadiny no adala sy ny zanany lahy no meloka; ny zavatra izay manompo azy dia voaozona.
3:13 Noho izany, mahavokatra dia ny momba sady tsy misy loto, izay tsy fantatra fandikan-dalàna am-pandriana; izy no mamoa amin'ny alalan'ny fikarakarana fanahy masina.
3:14 Ary lonaka ny mpitovo, izay tsy nanao heloka ny tanany, ary tsy nieritreritra ny faharatsiana hanohitra an'Andriamanitra; fa ny azy homena fanomezam-pahasoavana manokana ny finoana sy ny tena toerana tonga soa tao amin'ny tempolin'i Jehovah.
3:15 Fa ny vokatry ny asa tsara no be voninahitra, ary ny fototry ny fahendrena tsy ho very.
3:16 Fa ny zanaky ny mpaka vadin'olona dia tsy tonga vita, ary ny zanaky ny mpanota, dia ho roahina fandriana.
3:17 Ary raha velona lava, dia ho isaina ho na inona na inona, ary ny farany taona fahiny-taona dia ho tsy misy voninahitra.
3:18 Ary raha ho faty haingana, dia tsy manana fanantenana, na ny teny fampiononana amin'ny andro fampamoahana.
3:19 Fa ny heloky ny olona manana vokany mahatsiravina.
4:1 O Inona no tsara tarehy dia ny madio vokatry ny fahadiovana! Fa ny fahatsiarovana tsy mety maty, satria efa nahita, na tamin'i sy tamin'ny olona.
4:2 Rehefa izany ankehitriny, izy ireo manahaka azy, ary maniry izany, raha efa niala mihitsy, ary mandresy satroboninahitra mandrakizay, nahazo ny valisoany ny ady tsy misy loto.
4:3 Fa ny maro ny maro karazana samy hafa ny ratsy fanahy dia tsy ho ny tombontsoa, ary ny ketsa am-boalohany dia tsy homena fakany lalina, ary tsy izy ireo hanorina fototra mafy orina izay.
4:4 Ary raha miposaka amin'ny sampana nandritra ny fotoana kelikely, nefa, raha teo infirmly, dia hohozongozonina ny rivotra, ary, ny toko tsy forohana ny rivotra, Tsy hitsy intsony izy ireo.
4:5 Fa ny sampany tsy feno dia ho tapaka, ary ny voany dia ho tsy misy ilàna azy, ary mangidy hihinana, ary hifanaraka na inona na inona.
4:6 Fa ny niteraka zazalahy amin'ny ratsy no vavolombelona ny faharatsiana hanohitra ny ray aman-dreniny tao ny famotorana.
4:7 Nefa ny marina, raha ahazoany azy ny fahafatesana mialoha, dia ho velombelona.
4:8 Fa efa antitra aza atao mendri-kaja, na amin'ny lava maharitra, na amin'ny manisa ny isan'ny taona; nefa ny fahatakaran-javatra dia ny fotsy volo ny fahendrena ho an'ny lehilahy,
4:9 ary ny immaculate aina dia taranaka ny olon-kendry.
4:10 Sitrak'Andriamanitra, rehefa natao malala, sy ny fiainana amin'ny mpanota, dia niova.
4:11 Haingana izy nanaisotra, fa tsy afaka manova lolompo ny fahalalana, tsy afaka hampahadiso hevitra fitaka ny fanahiny.
4:12 Fa Mahaliana ny zava-tsoa fialam-boly manakona, ary ny nivadika ny faniriana dia mikatsaka ny hanimba ny saina tsy misy lolompo.
4:13 Vita tao anatin'ny fotoana fohy, dia tanteraka matetika.
4:14 Marina tokoa fa ny fanahiny dia mampifaly an'Andriamanitra. Noho io, haingana izy mba hitondra azy avy tao afovoan'ny heloka, fa ny olona mahita izany ka tsy mahalala, sady tsy mametraka izany zavatra izany ao am-pony:
4:15 fa ny fahasoavana sy ny famindram-po dia eo amin'ny olony masina, ary miahy ny olom-boafidiny.
4:16 Maty nefa ny marina no hanameloka ny ratsy fanahy velona, sy tanora maika vokatra vita amin'ny tsy rariny ela velona.
4:17 Fa hahita ny faran 'ny hendry, ka tsy mahalala, na sary an-tsaina, fa avy amin'Andriamanitra, ary noho izany dia ny Tompo no niaro azy.
4:18 Fa izy no hahita sy hanao tsinontsinona azy, fa ny Tompo dia maneso.
4:19 Ary rehefa afaka izany, dia ho lavo tsy misy voninahitra sy ny tsinontsinona teo anivon 'ny maty mandrakizay. Satria izy ireo no mirehareha sy ny moana, dia manorotoro azy ary hampihorohoroiko azy avy any amin'ny fanorenana ny lalana rehetra ho any an-tampon'ny, ny lao tanteraka, ka hampalahelo sy ny fahatsiarovana ho levona.
4:20 Dia haingana amin-tahotra eo amin'ny fahatakarana ny fahotany, sy ny helony tsy hiampanga azy ireo.
5:1 Ary ny olo-marina dia hitsangana amin'ny fiorenana mafy hanoherana ireo izay nampahory azy, ary efa nesorina ny asany.
5:2 Rehefa nahita izany, dia ho raiki-tahotra amin'ny tahotra mahatsiravina, ary dia ho gaga ny tampoka ny tsy ampoizina famonjena.
5:3 Noroahina amin'ny nenina, ary noho ny fahoriam-panahy ny fitarainany, dia hanao hoe-pony ireo: "Ireo no ireo izay tsy natao ho an'ny fotoana sasany haneso sy naneso baraka.
5:4 Tsy adala nihevitra ny fiainany ho fahaverezan-tsaina, ary ny farany ho tsy misy voninahitra.
5:5 Nahoana no lazaina fa ataony eo amin'ny zanak'Andriamanitra, ary ny fitoerana masina eo?
5:6 Noho izany, dia tafasaraka amin'ny lalan'ny fahamarinana, ary ny fahazavan 'ny fahamarinana dia tsy mbola nazava anay, ary ny masoandro-tsaina tsy nitsangan-ko velona aminay.
5:7 Reraka be izahay ny tenantsika an-dalana ny heloka sy ny fahaverezana, ary nandeha ny fomba sarotra, raha tsy miraharaha ny lalan'i Jehovah.
5:8 Ahoana no fiavonavonana soa antsika? Na inona no manandratra amin'ny harena nitondra anay?
5:9 Ireo zavatra rehetra efa lasa toy ny aloka, ary ho toy ny anjely mandeha haingana amin'ny alalan'ny;
5:10 ary tahaka ny sambo mandalo eo ny onjan-drano, rehefa lasa ny, soritry ny tsy hita, ary tsy afaka ny lalan'ny ny keel ao amin'ny onja;
5:11 na, tahaka ny vorona nanidina teny amin'ny habakabaka, Tsy misy porofo azy dia mba ho hita, nefa zara raha misy ny feo toy ny fidarohana ny elany manandratra ny rivotra sy ny, noho ny herin'ny azy dia, mizara ny rivotra izy efa Nalefa fiaramanidina manerana, izay sahiran-tsaina ny elany, ary rehefa afaka izany, tsy misy famantarana ny azy dia mba ho hita;
5:12 na, toy ny zana-tsipìka mikendry marika voafantina, ny rivotra Mbola tsy hisaraka, ary mba ho entina miaraka indray, ka dia ny mandalo tsy fantatra.
5:13 Ary toy izany koa isika,, fa efa teraka, hatrany hitsahatra tsy misy, ka hitany fa, dia hiala tsy misy famantarana ny hatsaran-toetra mba hampisehoana, fa ho levona ao amin'ny lolompo. "
5:14 Ny zavatra toy izany ireo izay nanota hoe any amin'ny helo.
5:15 Fa ny fanantenan'ny ratsy fanahy dia tahaka ny volo, izay tsofina lasa ny rivotra, ary toy ny sombin-javatra manify, izay naparitaky ny tafio-drivotra, ary toy ny setroka, izay niparitaka ny rivotra, sy tahaka ny fahatsiarovana ny vahiny mandalo indray andro.
5:16 Nefa ny marina dia ho velona mandrakizay, ary ny valim-pitia amin'ny Tompo dia, ary ny hevitry ny azy ireo ny amin'ny hevitry ny Avo Indrindra.
5:17 Noho izany, izy ireo dia handray ny Fanjakana tsara tarehy sy ny satroboninahitry ny voninahitra eo an-tanan'ny Tompo, Fa naninjitra ny tànany ankavanana izy, dia nanarona azy, ary ny sandriny masina izy, no hiaro ireny.
5:18 Ary ny zotom-pony dia handray fiadiana, dia hampitaovana ny mpanompony ho famaliana ny fahavalony.
5:19 Izy no hitafy ny rariny ho fiarovan-tratra, dia mahatakatra antoka fitsarana ho toy ny fiarovan-doha.
5:20 Izy no mifidy rariny toy ny ampinga tsy mety resy.
5:21 Nefa izy no hanasa ny fahatezerany mafy ho lefona, ary Izy no hiady miaraka amin'ireo ao amin'ny izao tontolo izao manohitra ny tsy mahay mandinika.
5:22 Zana ny helatra dia mitoraka olona mivoaka araka ny marina, ary, toy ny hoe avy Amin'ny curved tsipìka ny rahona, dia ho voaroaka ary manidina ho any amin'ny tapa-kevitra marika.
5:23 Ary ny havandra dia hatsipy toy ny vato feno fahatezerana, ary ny rano any an-dranomasina hitsangana hamely azy, ary ny renirano dia hitandrina mivoaka mafy.
5:24 Ny fanahin 'ny hatsaran-toetra ho mafy orina ka hahatohitra azy ireo ary toy ny tafio-drivotra ka hizara azy, dia hitarika rehetra izao tontolo izao ny heloka ho ngazana, ary ny lolompo hahohoko ny seza-pahefana.
6:1 Aleo fahendrena toy izay hery, ary ny mahira-tsaina no tsara noho ny mahery ny iray.
6:2 Noho izany, Mihainoa, Ry mpanjaka, sy hahatakatra; mianatra, ianareo mpitsara ny faran'ny tany.
6:3 Mihainoa tsara, anareo izay mihazona ny sain'ny ny vahoaka, ary izay mampifaly ny tenanareo amin'ny manelingelina ny firenena.
6:4 Fa nomena fahefana ho aminareo avy amin'ny Tompo sy ny hery avy amin'ny Avo Indrindra, izay no handinika ny asany sy mandinika ny hevitrao.
6:5 Fa, rehefa nisy fanompoam-pivavahana ny fanjakany, tsy hitsara marina, tsy mitandrina ny lalàn'ny fahamarinana, ary aza mandeha araka ny sitrapon 'Andriamanitra.
6:6 Mahatsiravina, ary haingana dia hiseho aminareo, satria izy no hanao fitsarana mafy ho an 'ireo izay miandraikitra.
6:7 Fa, ho ny kely, be famindram-po dia omena, fa ny mahery mahery haharitra fijaliana.
6:8 Fa ny Tompo dia tsy nalana na iza na iza ny toetra amam-panahy, ary tsy no hangovitra eo na iza na iza ny halehiben'ny, satria izy no nanao ny kely sy ny lehibe, ary Izy no miahy koa ho an'ny olona rehetra.
6:9 Fa fampijaliana mahery vaika manenjika ny mahery.
6:10 Noho izany, Ry mpanjaka, ireo, ny teniko, dia ho anao, mba hianatra fahendrena, ary tsy ho very.
6:11 Ho an'ireo izay efa rariny niaro ny rariny no hohamarinina, ary ireo izay efa nianatra ireo zavatra ireo dia hahita izay havaliny.
6:12 Noho izany, maniry ny teniko, tia azy, ary dia hanana fampianarana.
6:13 Ny fahendrena dia madio sy tsy malazo, ka dia mora hita 'ireo izay tia azy ka nahita' ireo izay mitady azy.
6:14 Mialoha izy ireo izay maniry ny, ka izy aloha manambara ny tenany ho azy ireo.
6:15 Na iza na iza ampandrenesiny tany am-boalohany ny mitady azy, tsy te hiasa, fa izy no hahita azy nipetraka teo an-baravarana.
6:16 Noho izany, ny mieritreritra momba ny, fahazavan-tsaina tanteraka, ary izay mbola hiambina azy, dia haingana ho azo antoka.
6:17 Fa izy mandehandeha mitady na izay mendrika azy, dia manambara ny tenany ho azy ireo tamim-pifaliana ao amin'ny fomba, ary nihaona azy ireo amin'ny tsy mahatsinjo lavitra.
6:18 Fa ny tena fiandohan'ny azy dia ny faniriana ho an'ny fampianarana.
6:19 Noho izany, ny zotom-po ho an'ny fampianarana dia fitiavana, sy ny fitiavana dia ny fitandremana ny lalàna izy, ary ny fitandremana ny lalàna dia ny tonga lafatra ny tsi-fahafatesana,
6:20 tsi-fahafatesana raha mahatonga antsika akaiky an'Andriamanitra.
6:21 Ary noho izany, ny faniriana fahendrena mitarika ho amin'ny fanjakana mandrakizay.
6:22 Raha, noho izany, ny sitrany dia ao amin'ny seza fiandrianana sy tehim-panjakana, Ry mpanjaka ny vahoaka, tia fahendrena, mba hanjaka mandrakizay;
6:23 tia ny fahazavana ny fahendrena, ianareo rehetra izay hitarika ny firenena.
6:24 Fa manao ahoana ny fahendrena, ary ny fomba natao, No tatitra, ary tsy hanafina ny misterin 'Andriamanitra ho afaka aminao, fa Izaho kosa hanadihady azy hatrany am-piandohana tamin'ny fahaterahany, fa hametraka ny fahalalana azy ao amin'ny mazava, ary tsy handalo ny fahamarinana.
6:25 Ary tsy hihazona ho any amin'ny lalana izay Nihemotra hiala amin'ny fialonana, satria toy izany, ny lehilahy dia tsy hihinana amin'ny fahendrena.
6:26 Fa ny fitomboan'ny hendry dia adala ho an'izao tontolo izao, ary ny mpanjaka hendry dia Izay fototry ny vahoaka.
6:27 Noho izany, handray torolalana ny teniko, Ary hahasoa anao.
7:1 tokoa, Izaho koa dia olombelona mety maty, toy ny olon-drehetra, ary ny taranaky ny eto an-tany, izay natao mialoha; sy ny an-kibon'ineny aho namboatra amim-pitandremana,
7:2 ao anatin'ny fotoam-folo volana, vita tamin'ny ra, avy amin'ny taranaky ny olona sy firavoravoan'ny natory miara-.
7:3 Ary rehefa teraka, I mby tao an-rivotra, ary toy izany koa amin'ny lamaody, Dia lavo an-tany, ary ilay feo voalohany aho nilaza, toy ny olon-drehetra, nitomany.
7:4 Ninonoan-jaza aho amin'ny fonony fitafiana sy amin'ny fikarakarana lehibe.
7:5 Fa tsy misy ny mpanjaka nanana fiandohan'ny hafa.
7:6 Noho izany, iray ihany ny fidirana any amin'ny fiainana ho an'ny olona rehetra, ary toy izany koa amin'ny niala.
7:7 Noho io, nisafidy aho, sy manam-pahalalana nomena ahy; ary nivavaka, ary ny fanahy manome fahendrena tonga tamiko;
7:8 ary dia nametraka azy eo anatrehan'ny fanjakana sy ny seza fiandrianana, ary noheveriko harena na inona na inona, raha oharina amin'ny azy.
7:9 Sady tsy mampitaha azy aho ny vato soa, volamena rehetra, raha oharina amin'ny azy dia toy ny fasika kely, ary ny volafotsy, Rehefa heverina azy, dia ho sarobidy toy ny vovoka.
7:10 I tia azy mihoatra noho ny ara-pahasalamana sy ny hatsaran-tarehy, ary napetrako manana azy eo anatrehan'i fahazavana, Fa ny fahazavana dia mety levona.
7:11 Kanefa zava-tsoa rehetra tonga tamiko miaraka aminy, ary tsy hita isa asa manavanana ny tànany;
7:12 ary nifaly tamin'ireo rehetra ireo ianao, satria fahendrena izany aho nandeha teo alohany, na dia tsy fantatro fa izy no renin'ny olombelona rehetra.
7:13 Izany no efa nianatra tsy lainga, ary mifandray tsy misy fialonana, ary ny tsy fivadihana tsy manafina.
7:14 Tokoa, izy tsy manam-petra dia harena sarobidy ho an'ny olona vata, ary izay hampiasa izany, ho tonga mpiray amin'ny fisakaizana 'Andriamanitra, satria natolotry ny fanomezam-pahasoavana ny fampianarana.
7:15 Andriamanitra anefa dia nanome ahy hiteny ny saiko, ary ny Torontoronina eritreritra mendrika ireo zavatra izay nomena ahy, satria izy no mpitarika ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina mpamboatra.
7:16 Fa teny an-tànany no dia izahay, ary ny teny, sy ny fahendrena rehetra, ary ny asan 'ny siansa, sy fampianarana.
7:17 Fa Izy no nanome ahy ny tena fahalalana izany zavatra izany, izay misy: mba hahalala ny milamina fandaharana 'izao tontolo izao, ary ny herin 'ny zavatra,
7:18 ny fiandohana sy ny fiafarana, ary ny midpoint ny fizaran-taona, ny toetra mampiavaka ny hanova zavatra, ary ny antokon'ny fotoana,
7:19 ny antokon'ny taona, ary ny fandaharana milamina ny kintana,
7:20 ny fomba aman-toetra ny biby, ary ny fahatezeran'ny bibidia, ny herin'ny rivotra, ary ny hevitry ny olona, ny maha-samihafa ny zavamaniry, ary ny soa azo fakany,
7:21 ary izay zavatra miafina sy tsy ampoizina, Nianatra aho; fahendrena, ny mpanao asa tanana ny zava-drehetra, nampianatra ahy.
7:22 Fa ao aminy dia ny Fanahy-tsaina: masina, Anarana iombonana, samy hafa, saro-takarina, fahaiza-, velona, madio, azo antoka, mamindra fo, fitiavana, tsara, fetsy, izay mandrara na inona na inona mahasoa,
7:23 maha-olombelona, tsara fanahy, famindram-, mendri-pitokisana, fiarovana, manana hatsaran-toetra rehetra, nijery fa ny zavatra rehetra sy ny mitantana ny zava-drehetra miaraka amin'ny madio sy marefo indrindra fahatakarana ny Fanahy.
7:24 Fa ny fahendrena dia mavitrika kokoa noho ny zavatra rehetra mavitrika, nefa tonga na aiza na aiza izy noho ny fahadiovana.
7:25 Fa izy no fofonain'ny ny hatsaran-toetra 'Andriamanitra sy ny tena emanation avy ny fahadiovan'ny ilay Andriamanitra mahery indrindra, ary noho izany na inona na inona madio afaka hanafika azy.
7:26 Tokoa, izy no famirapiratan'ny mandrakizay ny fahazavana, ary ny pentina fitaratra ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, ary ny endriky ny hatsaram-pony.
7:27 Ary na dia ny iray, dia afaka manao ny zava-drehetra; ary, tsy miova eo amin'ny tenany, izy Manavao ny zavatra rehetra, ary manerana ny firenena ny tenany izy dia midika ho fanahy masina, fametrahana azy ireo toy ny namana sy ny mpaminanin'Andriamanitra.
7:28 Fa Andriamanitra tia tsy misy fa izay monina amin'ny fahendrena.
7:29 Fa izy no mahavariana kokoa noho ny masoandro, ary hatreo ambonin'ny nahay ny kintana rehetra; ampitahaina amin'ny fahazavana, izy no hita fa teo anoloany izy.
7:30 Tokoa, rehefa tonga ny alina azy, Fa ny fahendrena dia tsy ho resin'ny lolompo.
8:1 Dia toy izany no, dia tonga avy amin'ny vazan-kery rehetra ny làlana mankany amin'ny hafa, Ary izy nandidy ny zavatra rehetra nahafinaritra.
8:2 Izaho efa tia azy, ary nitady azy hatramin'ny fahazazako, ary efa nangataka ny hitondra azy ho toy ny vadiko aho, ary dia lasa tia ny teny.
8:3 Izy manome voninahitra ny rohim-pirazanana, rehefa fiarahana amin'Andriamanitra; eny, ary ny zava-drehetra, ny Tompo dia tia azy.
8:4 Fa izy mampianatra ny fampianarana avy amin'Andriamanitra sy ny misafidy ny asany.
8:5 Ary raha harena no naniry mafy ho amin'ny fiainana, inona no karena be mihoatra noho ny fahendrena, izay efa nanompo tany ny zava-drehetra?
8:6 Fa raha ny saina dia mba hotompoina, izay, izay rehetra misy, dia lehibe noho izy mpanao asa tanana?
8:7 Ary raha misy tia rariny, ny asany mihazona herim-panahy lehibe; fa izy mampianatra fahononam-po sy ny fisainana, ny rariny sy ny hatsaran-toetra, ary na inona na inona no tena ilaina eo amin'ny fiainana olombelona.
8:8 Raha misy maniry maro be ny fahalalana, dia mahafantatra ny lasa sy ny fanombatombanana ny ho avy; izy mahalala ny fitaky ny resaka sy ny valin'ny fanehoan-kevitra; izy no mahafantatra ny famantarana sy ny zava-mahagaga, teo anoloan'ny fisehoan-javatra hatao, fisehoan-javatra roa andro ankehitriny izao sy ny ho avy amin'ny sokajin-taona.
8:9 Noho izany, Tapa-kevitra aho ny hitondra azy ho ahy ka hitoetra eo aminy, satria fantany fa izy dia ho mpanolo-tsaina tsara ary hampionona ny eritreritro sy ny fisasarana.
8:10 Noho ny, Manana mazava eo amin'ny fifanjevoana, ary voninahitra any amin'ny anti-panahy ny fahatanorako;
8:11 ary Izaho no ho hita ho fetsy amin'ny fitsarana, ary higagana eo imason 'ny mahery, ary ny tarehiny dia hanontany tena ny mpitarika ahy.
8:12 Rehefa mangina aho, dia miandry ahy; raha miteny, dia hanaja ahy; ary rehefa miresaka fa ela loatra, dia hametraka ny tanany eo amin'ny vavany.
8:13 Dia toy izany no, amin'ny alalan'ny azy, Dia manana ny tsi-fahafatesana, ary Izaho no bequeath fahatsiarovana mandrakizay ho an'izay hanaraka Ahy.
8:14 Dia hampitoetra ny firenena mba, ary ny firenena hanaiky izay ahy.
8:15 mandre ahy, mahatsiravina hisy mpanjaka hatahotra; ho an'ny vahoaka, Dia ho hita ho tsara sy mpiady mahery fo.
8:16 Rehefa miditra ao an-tranoko, Dia ny tenako sy ny fialan-tsasatra, noho ny resaka tsy misy mangidy, na ny orinasa na tediousness, fa ny fifaliana sy ny faharavoravoana.
8:17 Mieritreritra izany zavatra izany ao ny tenako, ary mitadidy tao am-poko fa ny tsy fahafatesana dia ny mieritreritra ny fahendrena,
8:18 ary izay ao an-finamanana tsara fifaliana, ary tamin'ny asan'ny tànany dia voninahitra tsy misy indro kely, ary ny adi-hevitra taminy no fahazavan-tsaina, ary voninahitra any amin'ny fizarana resaka taminy; Nandeha momba ny nitady, ka mba hitondra azy ho any amiko.
8:19 Fa i fomba mahavariana zazalahy, ary efa nanao ny tsara fanahy.
8:20 Na izany bebe kokoa, ho tsara, Tonga tany manana vatana tsy misy loto.
8:21 Ary satria fantatro fa tsy azo atao ny ho madio afa-tsy ho toy ny fanomezana avy amin 'Andriamanitra, ary fa teboka iray ny fahendrena mba hahafantatra izay fanomezana sarobidy ve izany, Dia nanatona ny Tompo, ary niangavy taminy, Ary hoy aho amin'ny foko rehetra aho:
9:1 "Andriamanitry ny razako sy Tompon 'ny famindram-po, Izay efa nanao zava-drehetra amin ny teninao,
9:2 ary ny fahendrenao dia nametraka ny olona mba hanjaka amin'ny biby izay efa atao amin'ny aminao,
9:3 ka dia handahatra izao tontolo izao amin'ny hitsiny sy ny rariny, ary hampihatra didim-pitsarana miaraka amin'ny mahitsy fo,
9:4 omeo ahy ny fahendrena, ny ankizivaviny Izy amin'ny seza fiandriananao, ary ho vonona ny handa Ahy avy tamin'ny zanakao,
9:5 satria izaho mpanomponao, ary ny zanaky ny ankizivavinao, ny lehilahy malemy, ary naharitra ela, amin'ny fahalalana voafetra ny fitsarana sy ny lalàna.
9:6 Ary raha misy olona tonga lafatra dia teo anivon 'ny zanak' olombelona, Fa raha ny fahendrenao nesorina taminy, dia ho isaina ho na inona na inona.
9:7 Efa nifidy ahy ho mpanjaka ny firenenao, sy mpitsara ny zanakareo-lahy sy ny zanakao-vavy.
9:8 Ary niantso ahy ianao mba hanorina tempoly eo amin'ny an-tendrombohitra masina, ary, tao an-tanànan'i fonenanao, alitara, naka ny endriky ny tabernakely masina, izay efa voaomana hatrany am-piandohana.
9:9 Ary aminao no misy fahendrena, izay tsara ny asanao, ary izay tsy lavitra teo, raha nanao izao tontolo izao ianareo, ary iza no mahalala izay mahafinaritra ny masonao, ary izay tarihin 'ny fampianarana.
9:10 Mampiala azy ao an masina ny lanitra sy ny seza fiandrianan 'ny voninahitra, ka dia izy no amiko sy ny asa amiko, ary Izaho no mahalala izay ankasitrahana aminao.
9:11 Fa izy no mahalala sy mahatakatra ny zava-drehetra, ary no hitarika ahy amin'ny asako soberly, ary hiaro ahy noho ny heriny.
9:12 Ary ny asa dia ho ekena, ary Izaho no hifehy ny olonao rariny, ary Izaho ho mendrika ny seza fiandrianan'ny raiko.
9:13 Fa iza no olona afaka mahafantatra ny fikasan'Andriamanitra? Na iza no sary an-tsaina ny sitrapon'Andriamanitra?
9:14 Fa ny hevitry ny olombelona dia saro-kenatra, ary ny tsy mahatsinjo lavitra azo antoka.
9:15 Fa ny vatana mety lo ny fanahy izay mamesatra, ary izany dia tany fonenana mamotsitra hevitra maro eo amin'ny saina.
9:16 Ary hanombana sarotra ny zavatra izay avy eto an-tany, ary hitantsika tamin'ny fahoriana ny zavatra izay ao anatiny ny fomba fijery. Ary iza no hisafo ny zavatra izay any an-danitra?
9:17 Koa, iza no mahalala ny sainao, raha tsy manome fahendrena sy handefa ny Fanahy Masina avy any ambony?
9:18 Ary toy izany, ireo izay eto an-tany no nanitsy ny lalana, ary ny olona hianatra ny zavatra izay mahafaly anao.
9:19 Fa ny fahendrena dia voavonjy, izay sitraky anao, Tompo O, hatrany am-piandohana. "
10:1 Fa izy, izay no natao voalohany Andriamanitra, ny Ray 'izao tontolo izao, izay irery rehefa namorona; dia nitsimbina azy,
10:2 ka nitondra azy teny ivelan'ny ny fandikan-dalàna, ary nomeny azy ny fahefana foana ny zava-drehetra.
10:3 Rehefa afaka izany,, raha tsy marina lehilahy niala avy azy amin'ny fahatezerany, dia maty noho ny fahatezerana noho ny famonoana ny rahalahiny.
10:4 Noho io, ny rano rehefa nandrava ny tany, fahendrena nahasitrana azy indray, mitarika ny olo-marina amin'ny alalan'ny tsinontsinona hazo.
10:5 Koa, rehefa efa nikomy ny firenena miara-manaiky ny faharatsiana, fantany ny marina, ka niaro azy tsy misy tsiny eo anoloan 'Andriamanitra, ary nitsimbina ny heriny avy amin'ny famindram-po ho an'ny zanany.
10:6 Nanafaka izy io olona marina avy amin'ny fandringanana ny ratsy fanahy, nitsoaka nidina afo teo an-tanàna dimy,
10:7 izay, ho vavolombelona ny haratsiam-panahiny, dia tany lao foana mifoka, ary ny hazo mamoa amin'ny fotoana tsy azo antoka, ary ny sarin-tsira mitsangana toy ny tsangambato any amin'ny tsy mpino fanahy.
10:8 Fa, in mandika fahendrena, izy; lavo, tsy dia be ao amin'ity, fa izy ireo tsy mahalala ny tsara, fa izy ireo bequeathed ny olona fahatsiarovana ny fahadalana, amin'izay mba, ao amin'ny zavatra izay nanota, izy ireo tsy afaka afa-mandositra Mariho.
10:9 Kanefa fahendrena dia afaka amin'ny alahelo ireo izay tena mandinika.
10:10 Izy no nitarika ny olona marina, ity ny rahalahiny mandositra ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fomba tsara, ka nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra, ary nomeny azy ny fahalalana ny fahamasinana, nanome voninahitra azy amin'ny asa, ary nahavita ny asany.
10:11 Eo amin'ny manodidina fitaka, dia nikoriana manodidina azy ka nanao azy marina.
10:12 Nanakana azy tsy izy ny fahavalony, dia niaro azy avy ny mpanoloky, ary nomeny azy mafy ady ka mba resy sy ny mahafantatra fa ny herin'ny zavatra rehetra ny fahendrena.
10:13 Izy tsy nandao ny olo-marina ny olona rehefa namidy, fa nanafaka azy amin'ny mpanota; dia nidina nanaraka azy any an-davaka,
10:14 ary tsy nandao azy tamin'ny gadra varahina, raha izy nitondra azy ny tehim-panjakan'ny ny fanjakana sy ny hery manohitra ireo izay nampahory azy, ka nasehonao tamin'ny ho mpandainga izay efa afa-baraka azy, ka nanome azy voninahitra mandrakizay.
10:15 Nanafaka marina izy ity, ary ny tsy manan-tsiny ny olona taranany, avy any amin'ny jentilisa izay efa nampahory azy.
10:16 Izy niditra ny fanahy ny mpanompon'Andriamanitra sy mahatahotra mpanjaka nitsangana teo anatrehany: eo afovoan'ny zava-mahagaga sy famantarana,
10:17 ary nadika hoe ny marina ny karaman'ny asany, ary nitondra azy ireo teny amin'ny fomba mahagaga; ary izy ho azy ireo, toy ny fonony antoandro, sy tahaka ny fahazavan 'ny kintana amin'ny alina.
10:18 Izy no nitondra azy namakivaky ny Ranomasina Mena, ary nitarika azy ireo namakivaky ny rano lehibe.
10:19 Fa ny fahavalony, dia anaty rano any an-dranomasina, ary avy any amin'ny lalina furthest, dia nanatsoaka azy. Noho izany, ny olo-marina ka nalainy ihany ny babo ny ratsy fanahy.
10:20 Ary nihiaka ny anaranao masina, Tompo, Ary izy ireo niara-nidera ny mpandresy tananao,
10:21 satria fahendrena nisoka-bava ny moana, ary nanao ny kabary ny zaza nahay nandaha-teny.
11:1 Nitarika ny asany izy eo an-tanan 'ny mpaminany masina.
11:2 Nanao lalana amin'ny alalan'ny faritra lao, izay antany, ary nanangana ny tranony ao amin'ny toerana mitokana.
11:3 Tsy Nivadika hiady amin'ny fahavalo, ary voamarina ny tenany ho afaka amin'ny fahavalony.
11:4 nangetaheta izy ireo, ary niantso anareo, ary nomeny azy ireo ny rano avy amin'ny vatolampy lalina indrindra, ary ny fialantsasatra amin'ny hetaheta avy amin'ny vato mafy.
11:5 Fa ny rano, ny fahavalony efa voasazy, noho ny kolikoly ny rano fisotro; ary noho izany, anisan-dry zareo, nony avy ireo zanak'Andriamanitra Isiraely nanana ny betsaka dia ho nahita, ny fahavalony nifaly;
11:6 nefa na dia ny rano, raha mbola tany sahirana, Hay tsara ho azy ireo.
11:7 Fa raha tokony ho loharano, na dia maharitra mandrakizay in flow, nomenao ra olombelona ny tsy marina,
11:8 ary raha mbola ho torotoro ho fahafaham-baraka noho ny namono ny zaza, anao manokana tampoka nanome be dia be ny rano,
11:9 manambara ny alalan 'ny hetaheta, izay nitranga tamin'izany andro izany, fomba mety miainga anao manokana sy ho hamono ny fahavalony.
11:10 Fa rehefa ho pitsapana, ary na dia rehefa mamindra fo fandraisana fanitsiana, fantany amin'ny fomba ahoana, Raha ny fahatezeranao nitsara ny ratsy fanahy, izy ireo hijaly fijaliana.
11:11 Fa ireo, nanoro hevitra toy ny ray, ianao nankatoavina; fa ny olon-kafa, famotorana mafy toy ny mpanjaka, nanameloka anao.
11:12 Fa raha tsy eo, na ankehitriny, nampijaliana izy ireo mitovy.
11:13 Fa efa nahazo roa sosona: fisasarana sy ny mitaraina ao amin'ny fahatsiarovana ny zavatra efa lasa.
11:14 Fa raha nihaino ny sazy, hanatrika ny ny tombontsoa, Dia niantso an-tsaina ny Tompo, Nankafizinay koa ilay vokatra farany.
11:15 Fa na dia naneho faneso natsipiny avy hevi-diso fanambarana, any am-parany dia talanjona ny vokany, nefa izany dia tsy mitovy amin'ny mangetaheta ny rariny.
11:16 Fa araka ny fomba fisainany ny tsy mahay mandinika heloka, satria ny sasany, mania, dia niankohoka moana ny menarana, ary tsy misy ilana azy ny biby, nanirahanao azy maro moana biby ho valifaty,
11:17 ka dia mba ho fantany fa ny na inona na inona ny olona fahotana, araka izany koa no izy nampijaly.
11:18 Fa tsy azo atao noho ny rehetra-tanana mahery, izay nahary izao tontolo izao avy amin'ny tsy fantatra ara-nofo, handefa tamin 'izy ireo maro be ny orsa, na liona masiaka,
11:19 na, amin'ny fahatezerana, biby iray karazana vaovao, goavana sy hafahafa, na nifofofofo ny afo zavona, na falehan'ny ny odorous setroka, na mitifitra mahatsiravina pitik'afo amin'ny masony;
11:20 ahoana, ratra tsy ho afaka hamongotra azy, fa nahita ihany koa ny tena dia hamono azy noho ny tahotra.
11:21 Na izany aza, na dia tsy misy ireo, dia mety ho namoy ny ainy tamin'ny iray ihany no fofonaina, po ny fanenjehana ny fanaovana ary rehefa niparitaka noho ny fanahin 'ny hatsaran-toetra; fa ianareo kosa nibaiko ny zava-drehetra ny habeny sy ny isany sy ny lanjany.
11:22 Na dia maro aza ireo mahery, ianao irery ihany no handresy foana. Ary iza no manohitra ny herin'ny sandrinao?
11:23 Fa, toy ny vary kely eo ambonin'ny mizana, fotsiny toy izany izao tontolo izao eo anatrehanao, ary tahaka ny rano indray mitete ando vao mangiran-dratsy, izay midina eto an-tany.
11:24 Fa ianao kosa Mamindra fo amin'ny rehetra, satria afaka manao rehetra, ary handroaka ny fahotana ny olona noho ny fibebahana.
11:25 Fa tia ny zavatra rehetra izay, , fa halanao ny na inona na inona ny zavatra nataonao; ho anao, dia tsy mba namorona na nanorina na inona na inona izay fa halanao.
11:26 Fa ahoana na inona na inona hiaritra, afa-tsy noho ny sitraponao? Ary inona no, rehefa antsoina amin'ny tsy mba misy, ho voaro?
11:27 Kanefa Kanefa mitsimbina ny zavatra rehetra, satria anao, Tompo O, izay tia fanahy.
12:1 O tsara sy miantra, Tompo, dia ny fanahy izay ao anatin'ny zava-drehetra!
12:2 Noho izany, ireo izay mirenireny Nivezivezy, ianao hanitsy, ary, ho an 'ireo izay manota, anao torohevitra azy ireo sy hananatra azy ireo, amin'izay mba, rehefa nandao lolompo, mba mino anao, Tompo O.
12:3 Ho an'ireo mponina fahiny ny tany masina, izay anao ho zava-betaveta,
12:4 satria nanao asa feno fankahalana aminao, amin'ny alalan'ny fanafody tsy ara-drariny sy ny sorona,
12:5 ary ny tsy misy indrafo mpamono ny zanany, ary ny mpihinana ny olombelona tsinainy, ary ny devourers ny ra afa-tsy ny fiaraha-monina fanasan 'ny Tompo,
12:6 ary ny mpivarotra manao ny lanonana ny ory fanahy, no sitrak'Andriamanitra handringana ny tanan 'ny ray aman-dreny,
12:7 ka amim-pahamendrehana mba hiarovana ny-tany 'ny zanak' Andriamanitra, any amin'ny tany izay malala indrindra avy aminao.
12:8 Na izany aza, ka dia ianao no mandefitra na dia ireo lehilahy ireo, Hianao no naniraka fanenitra, mpialoha lalana ny tafika, tena mba handringana azy tsikelikely,
12:9 Tsy noho ianareo tsy afaka handresy ny ratsy fanahy ny olo-marina eo amin'ny ady, na amin'ny biby lozabe, na tamin'ny teny henjana mba handringana azy faingana,
12:10 fa, amin'ny fitsarana ny fiakarana, ianao dia manome azy ireo toeram-fibebahana, tsy mahalala fa ny firenena ratsy fanahy, ary ny lolompo dia raiki-tampisaka, ary ny toe-tsainy tsy ho afaka niova.
12:11 Noho izany dia voaozona taranaka hatrany am-piandohana. Fa tsy ianareo no, matahotra na iza na iza, omeo fitia ny fahotany.
12:12 Fa iza no hilaza aminareo, "F'inona 'ty nataonao?"Ary iza no hitsangana hanohitra ny fitsarana? Ary iza no ho tonga eo anatrehanao toy ny mpiaro ny ara-drariny ny olona? Ary iza no hiampanga anareo, raha ho very ny firenena, izay efa nataony?
12:13 Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, izay manana fiahiana rehetra, izay ianao dia mampiseho fa tsy mba fitsarana tsy ara-drariny.
12:14 Sady tsy hisy mpanjaka na mpanao jadona manontany eo anatrehanao ny amin'ireo izay rava.
12:15 Noho izany, satria Hianao no marina, Mandidy ny zava-drehetra ianao rariny, mihevitra azy io avy any ivelany ny hatsaran-toetra mba hanameloka azy izay tsy mendrika ny ho saziana.
12:16 Fa ny hery no fiandoham-rariny, ary, satria Tompon'ny rehetra, manao ny tenanao ho mandefitra rehetra.
12:17 Fa maneho hery ho an'ireo izay tsy mino ianareo mba ho tanteraka eo amin'ny fitondrana, ary hampiharihary ny fireharehan'ny ireo izay tsy mahafantatra anao.
12:18 Na izany aza, ianao no tompon'ny fahefana, satria ianao mitsara amin'ny fiadanana, ary satria ianao mikarakara antsika fanajana lehibe; fa akaiky anao mba hampiasaina isaky ny dia.
12:19 Fa ianareo kosa efa nampianatra ny olona, amin'ny alalan'ny asa toy izany, fa tsy maintsy ho marina sy maha-olombelona, ary Hianao efa nampanjaka ahy lahy mba ho ny tsara fanantenana, satria amin'ny fitsarana ianao hanome toerana ho fibebahana hahafahana amin'ny fahotana.
12:20 Fa na dia ny fahavalon'ny mpanomponao dia mendrika ny ho faty, no nampahoriany azy amin'ny lehibe hihaino azy, manome ny fotoana sy ny toerana famantarany zavatra izy ireo dia ho azo ovana amin'ny lolompo;
12:21 inona no fahazotoana, avy eo, no nitsara ny zanakareo, ray aman-dreny izay nomenao fianianana sy ny fanekempihavanana amin'ny finoana tsara!
12:22 Noho izany, raha mbola manome antsika ny famaizana, manome ny fahavalontsika ny hamaroan 'ny fanindronana, mba ho amin'ny fitsarana mba tsarovy ny hatsaran-toetranao, ary rehefa tsaraina, mba manantena ny famindram-po.
12:23 Noho izany, koa izany, izay efa niaina ny niaina ny fiainany-kadalana, ary tsy ara-drariny, ny alalan 'ireo zavatra ireo fa izy ireo nitsaoka, nomenao ny fijaliana lehibe indrindra.
12:24 Ary, tokoa, nirenireny izy ireo nandritra ny fotoana ela tany an-dalana ny fahadisoana, tsiny ireo zavatra ireo toy ny andriamanitra, izay tsy misy ilana azy na dia ny biby fiompy, velona amin'ny fitondran-tena adala tsy mahay mandinika.
12:25 Noho io, nomenao ny fitsarana haneso, toy ny hoe avy amin'ny adala ankizy.
12:26 Fa ireo izay tsy mbola nanitsy ny fanesoana sy ny ady nataon'ny, efa nandalo fitsarana mendrika 'Andriamanitra.
12:27 Fa eo amin'ireo izay tezitra noho ny fijaliany, izay tonga amin'ny alalan'ny ireo zavatra izy ireo malaza ho andriamanitra, nony hitany fa ho ringana izy ireo amin'izany toy izany, ireo izay tsy nety taloha fahalalana Azy tsara, Niaiky ankehitriny an'ilay tena Andriamanitra, ary, noho io, ny faran 'ny fanamelohana tonga teo aminy.
13:1 Fa zava-poana ny olona rehetra, izay tsy eo ambany ny fahalalana an'Andriamanitra, ary izay, avy amin'ireo zavatra tsara izay hita, tsy afaka hahatakatra izay no, na, ny mandinika ny asa, izy ireo manaiky Ilay tany ny mpanao asa tanana.
13:2 Fa tsy, efa heverina na ny afo, na ny rivotra, na ny rivotra iainana, na ny faribolana ny kintana, na Ranomasina Lehibe, na ny masoandro sy ny volana, mba ho ny andriamanitra izay manapaka izao tontolo izao.
13:3 Raha izy ireo, rehefa tia ny toy izany zava, nataony izy ireo mba ho andriamanitra, aoka ho fantany akory ny halehiben 'ny Tompo azy ao amin'ny famirapiratana. Fa izay namorona ny zava-drehetra dia ny mpanoratra ny hatsaran-tarehy.
13:4 Na, raha gaga noho ny heriny sy ny vokatry, aoka izy ireo hahatakatra ny amin'izany zavatra izany, fa izay namorona ny azy no mahery noho izy ireo.
13:5 Fa, Noho ny halehiben'ny ny famoronana sy ny hatsaran-tarehiny, ny mpamorona ireo dia ho afaka ny ho hita discernibly.
13:6 Na izany aza, niakatra ho any io hevitra io, ny fitarainana momba izany no ambany. Fa angamba dia nanao fahadisoana amin'ity, raha maniry sy mikatsaka ny hahita an'Andriamanitra.
13:7 Ary, tokoa, manana mahazatra ny sasany taminy noho ny asany, vao hikatsaka izy, ary izy ireo dia manantena, satria ny zavatra izay izy ireo no mahita tsara.
13:8 Fa, Avy eo indray, ary tsy afaka ny trosa ho tsinontsinoavina.
13:9 Fa, raha toa izy ireo afaka mahafantatra ampy mba afaka lanja ny izao rehetra izao, ahoana no tsy mora hahita ny Tompo azy?
13:10 Kanefa ireo dia tsy sambatra, ary ny fanantenana dia ho any amin'ny maty, Fa efa antsoina hoe 'andriamanitra' ny asan'ny an-tànan'ny olona, volamena sy volafotsy, ny famoronana ny fahaiza-manao, ary ny endriky ny biby, na tsy misy ilàna azy vato, ny asan'ny tanana fahiny.
13:11 Na, dia toy ny hoe ny mpanao asa tanana, dia mpiasa ny ala, efa nanapaka hazo mahitsy, ary, ny fahaizany, noharatany ny hodi-kazo rehetra, ary, ny fahaiza-manao, amim-pahazotoana namboatra fanaka, azo ampiharina eo amin'ny fiainana ampiasaina,
13:12 ary na dia ny sisa tsy dia reraka ny asany ao amin'ny fanomanana ny sakafo;
13:13 ary, avy amin'ny sisa ity, izay lasa mahasoa na inona na inona, curved ny tapa-kazo sy feno fatotra, dia tsara carves tao an-nanam-potoana, ary, ny alalan 'ny fahalalana tsara ny kanto, namorona izany, ary mahatonga azy io araka ny endrik 'olona,
13:14 na zavatra mitovy amin'ny biby, tsara nisafo azy amin'ny bato mena, mba hanaovana azy mena ny lokon'ny ny mpanome loko, dia nanarona rehetra tsy fahalavorariana izay ao aminy;
13:15 ary izany dia toy ny hoe nanao tsara ny fialan-tsasatra ho azy, na dia mametraka azy io ao amin'ny rindrina, ary fastening azy amin'ny vy,
13:16 fanomezana ho azy, fandrao ho lavo, satria fantany fa tsy afaka manampy ny tenany, fa sary ary izany dia mila fanampiana.
13:17 Ary avy eo, fanaovana fanatitra, dia manontany momba ny harena, ary ny zanany, ary momba ny fanambadiana. Ary dia tsy menatra hiresaka izany izay tsy misy fanahy.
13:18 Ary ho an'ny fahasalamana, tokoa, zavatra fahasalamana dia ho nivavaka tamin'i, ary ny fiainana, Niangavy izy izay efa maty, ary fanampiana, dia niantso teo zavatra tsy afa-manoatra,
13:19 ary ho solon'ny tsara dia, Mampirisika izy izay tsy afaka mandeha, ary ny fahazoana, ary miasa, sy ny fahombiazana amin'ny zava-drehetra, Mampirisika izy izay tsy misy ilàna azy amin'ny zavatra rehetra.
14:1 Indray, iray hafa, mieritreritra handeha an-tsambo, ary raha vao hanao ny diany noho ny onjan, Miantso tapa-kazo marefo kokoa noho ny hazo izay mitondra azy.
14:2 Fa izao no lazain'i faniriana efa sarintsariny ho nahazo, ary ny mpanao asa tanana dia namorona ny fahatakaran-javatra.
14:3 Fa ny fitondran'Andriamanitra, Ray O, mitantana, satria efa nanome ho an'ny lalana eny amin'ny ranomasina sy tena azo antoka lalana eo amin'ny onja,
14:4 mampiseho fa afaka hamonjy avy ny zava-drehetra, na dia misy olona tokony halehany ny ranomasina tsy misy fahaiza-manao.
14:5 Fa, ka ny asan'ny ny fahendrenao mba tsy ho foana, noho izany, matoky olona na dia ny fanahiny ho amin'ny tapa-kazo kely, ary, niampita ny ranomasina tamin'ny raft, izy ireo no hafahana.
14:6 Fa, hatrany am-piandohana, raha ny mpirehareha ireo olona goavam-be ho faty, ny fanantenana 'izao tontolo izao, nandositra sambo, nanome indray ny taona ho avy ny taranaky ny nahaterahana, izay fehezin'ny tananao.
14:7 Fa sambatra ny hazo amin'ny alalan'ny izay rariny atao.
14:8 Fa, ny alalan 'ny tanana izay mahatonga ny sampy, iny, ary izay nanao azy, dia voaozona: izy, tokoa, satria efa nanompo ny azy, ary, satria, na dia marefo, dia antsoina hoe 'andriamanitra.'
14:9 Fa ny ratsy fanahy sy ny impiety dia manafintohina an'Andriamanitra koa.
14:10 Ho amin 'izay atao, niaraka tamin'i Kristy, izay nanao azy, Hijaly fijaliana.
14:11 Noho io, ary araka ny fanompoan-tsampy 'ny firenena, tsy hisy fialofana, fa ny zavatra noforonin'Andriamanitra natao ho fankahalana, ary ho fakam-panahy ho an'ny fanahin 'ny olona, sy ho eo an fandrika ho an'ny tongotry ny adala.
14:12 Fa ny fiandohan'ny fijangajangana dia ny fikarohana ho an'ny sampy, ary avy ny famoronana avy ny kolikoly eo amin'ny fiainana.
14:13 Fa tsy nisy hatrany am-piandohana, ary tsy ho mandrakizay ireo misy.
14:14 Fa araka ny fahabangana lehibe ny olona dia tonga amin'izao tontolo izao, ary noho izany dia tsy ho ela ny farany hita.
14:15 Fa ny ray, sosotra ny fijaliana ny alahelo, nanao sariolona zanany, izay efa tampoka halaina aminy, ary avy eo, izay maty toy ny olona, manomboka izao mba hiankohofana tahaka raha misy andriamanitra, ary toy izany koa ireo fombafomba sy sorona naorina teo amin'ny mpanompony.
14:16 Avy eo, Ary rehefa afaka fotoana, heloka tombony hery ao anatin'ny fomba amam-panao diso ity, ka dia io no hitan'ny fahadisoana toy ny hoe lalàna, ary izany figment efa nivavaka araka ny didin'i mpitondra jadona.
14:17 ary ireo, ny olona izay afaka nefa tsy mba nisehoseho voninahitra noho izy ireo lavitra, ny endriky ny mba nisy nentina avy any lavitra, ary izany dia nanao sary toy izany koa ny mpanjaka fa te hanome voninahitra, amin'izay mba, araka ny solicitude, mba Manompoa Azy izay tsy tonga, toy ny raha teo.
14:18 Na izany aza, dia mandalo ao an-fikarakarana, ary ireo izay tsy nahalala, tiany noho ny tsara indrindra ny mpanakanto.
14:19 Fa, ta-hahazo sitraka tamin'ny olona nanakarama azy, nitarina ny kanto, mba hamolavola ny sarin tsara kokoa.
14:20 Fa ny vahoaka tao olona, hiangona ny hatsaran 'ny asa, ankehitriny nihevitra azy ho andriamanitra, izay efa taloha voninahitra toy ny olona.
14:21 Ary izao no famitahana ny aina: fa ny olona, manompo na ny fironana na ny mpanjakany, nomena ny anarana unutterable ny vato sy hazo.
14:22 Ary dia tsy ampy ho azy ireo mba handeha amin'ny lalan-diso ny amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, fa koa, raha mbola miaina ao anatin'ny tsy fahalalana ny ady lehibe, milaza ny maro sy ny zava-dratsy lehibe toy izany 'fihavanana.'
14:23 Fa na dia sorona ny zanany, na manao sorona maizina, na dia hanao alim feno fahaverezan-tsaina,
14:24 ka ankehitriny dia tsy mba hisy hiaro ny fiainana, na mitahiry madio fanambadiana, nefa ny iray ihany mamono iray hafa amin'ny alalan'ny fialonana, na malahelo azy tamin'ny fanitsakitsaham-bady.
14:25 Ary ny zavatra rehetra dia miara-mifangaro: ra, vonoan-olona, ny halatra sy ny hosoka, ny kolikoly sy ny fanitsakitsaham-bady, korontana sy ny vavolombelona mandainga, aretina ao anatin'ny zava-tsoa,
14:26 fanadinoana 'Andriamanitra, fandotoana ny fanahy, fanovana, fiovana fananahana, inconstancy ny fanambadiana, voajanahary ny fanitsakitsaham-bady sy ny lehilahy miray amin'ny lehilahy.
14:27 Fa ny fanompoam-pivavahana amin'ny sampy tsy hay lazaina no antony, ary ny fiandohana sy ny fiafarana, ny ratsy rehetra.
14:28 Fa na manao zavatra koa ny fahadalana raha sambatra, na dia nikiry ny fivoaky ny miteny lainga, na misy azy ireo tsy ara-drariny, na izy ireo mailaka manao vavolombelona mandainga.
14:29 Fa, raha matoky ny sampy, izay tsy misy fanahy, mivoady ratsy, Manantena izy ireo fa tsy haninon-tsy haninona ny tenany.
14:30 Noho izany, avy amin'ny andaniny sy ny ankilany dia ho Mety indrindra hitranga, satria efa nisaina hanao ratsy 'Andriamanitra, mihaino ho an'ny sampy, ary satria efa nianiana ny tsy rariny, ny soloky manamavo ny rariny.
14:31 Fa fianianana tsy ny hatsaran-toetra, fa manota foana manodidina ny sazy araka ny fahadisoan'ny ny tsy marina.
15:1 fa ianareo, Andriamanitsika, dia mamindra fo sy marina, marary, ary famindram-po nandidy ny zava-drehetra.
15:2 Ary, tokoa, raha manota isika, isika dia Anao, mahalala ny fahalehibiazanao; ary, raha toa ka tsy manota, dia fantatsika fa isika no isaina miaraka aminao.
15:3 Fa ho ahy ny nahafantatra anareo tonga lafatra ny rariny, ary ny hahalala ny rariny sy ny hatsaram-panahy no fototry ny tsy fahafatesana.
15:4 Fa ny mahay drafitra ny ratsy fanahy dia tsy nitondra anay ho any fahadisoana, na ny aloky ny sary, ny vokany asa, sary rehefa sculpted ny alalan 'ny fampiasana ny loko isan-karazany,
15:5 imason'ny izay manome faniriana ny adala, Ary tia ny endriky ny sary tsy manana aina tsy misy fanahy.
15:6 Mendrika ny tia ny ratsy, ireo izay manantena zavatra toy izany, ary ireo izay manao azy, ary ireo izay tia azy, ary ireo izay mampirisika azy.
15:7 Fa na dia ny mpanefy tanimanga, maika laboriously, Mamolavola ny malemy ny tany ao an-karona, ny tsirairay noho ny fampiasana. Ary avy koa izy Mamolavola fanaka tanimanga, ireo izay madio ho an'ny fampiasana, ary toy izany koa, ireo izay ho ny mifanohitra. Fa, tahaka ny inona ny fampiasana ny fanaka, ny mpanefy tanimanga no Mpitsara.
15:8 Ary amin'ny ezaka Mamolavola-poana izy andriamanitry ny tanimanga ihany, izay kely talohan'ny efa vita amin'ny eto an-tany, ary, aorian'ny fotoana fohy, Izy no niverina izay nialany fony izy tonga, mba ho nilaza ny izay mihazona ny trosa ny ainy.
15:9 Kanefa ny olana dia, tsy izay ny asany dia ho, na fa ny ainy fohy, fa Izy no nanohitra 'ireo izay miasa volamena sy volafotsy, Nefa Izy koa no toy izany koa ho an'ireo izay miasa miaraka amin'ny varahina, ary voninahitra fa manao zava-poana.
15:10 Fa ny fony lavenona, ary zava-poana ny manantena loto, ary ny aina mihoatra noho ny mahazatra tanimanga,
15:11 satria tsy miraharaha ny iray izay novolavolaina azy, ary izay tsikelikely tao aminy ny fanahy miasa, ary iza no nanisy fofonaina tao aminy ny fanahy velona.
15:12 Nefa nihevitra mihitsy aza ny fiainantsika mba ho nalaina natao kilalaon'ankizy, ary ny ilaina eo amin'ny fiainana mba ho fanangonan-karena ny harena, ary fa tsy maintsy ho hahazo zavatra amin'ny fomba azo atao rehetra, na dia ny ratsy.
15:13 Fa, mihoatra noho izay rehetra hafa, fantany ny tenany ho tsy ampy, izay, avy marefo ara-nofo eto an-tany sy ny fanaka tsy ampy amin'ny sarin-javatra voasokitra.
15:14 Fa ny adala rehetra sy ny tsy faly, amin'ny anjara-raharaha momba ny lalan'ny fanahy ny mpirehareha, dia fahavalon'ny olonao, ary no manapaka azy,
15:15 satria efa nohajain'ny rehetra ny sampin'ny jentilisa ho andriamanitra, izay tsy manana ny fampiasana ny maso ny mijery, na orona hantsaka fofonaina, na tsofina ho enti-mihaino, na ny rantsan-tanana mba hahatakatra, ary na dia ny tongony dia mora mandeha.
15:16 Fa ny olona dia nahary azy ho, ary izay nindrana ny fofonaina, Mpamorona azy. Fa tsy misy olona dia ho afaka ny hanangana Andriamanitra, naka ny endriky ny tenany.
15:17 Fa, ho eto an-tany, ny maty dia tsy ampy ny zavatra tsy ara-drariny tanana. Na izany aza, izy dia tsara noho ireo zavatra izay mivavaka, satria efa velona tokoa, na dia tsy eto an-tany, nefa tsy mahalala.
15:18 Koa, dia hiankohoka eo anatrehan'ny biby mahantra indrindra, for, hanao fampitahana adala, ireo hafa dia ratsy.
15:19 Kanefa na dia amin'ny fahitana no misy manavaka na inona na inona tsara ireo biby. Nefa efa nandositra ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, sy ny fitahiany.
16:1 Noho io, ary amin'ny alalan'ny zavatra mitovy amin'ny ireo, izy ireo Navela mety hiaritra fijaliana, ary izy ireo nandringana ny maro ny biby.
16:2 Fa tsy ireo fijaliana, no nitantana ny olona tsara fanahy, manome azy ireo ny faniriana ho an'ny tsiro vaovao avy amin'ny nahafinaritra, ary manomana papelika noho ny sakafo,
16:3 amin'izay mba, na dia ireo maniry sakafo, noho ireo zavatra izay naniraka nanambarana izany taminy, ireo efa niala avy amin'ny faniriana ilaina. nefa izao kosa, rehefa afaka fotoana fohy, rehefa tonga malemy, nanandrana vaovao sakafo.
16:4 Fa tsy maintsy, na dia tsy manan-kalahatra, ho azy ireo ho tonga tampoka eo amin'ny faharavana ny fampiharana ny jadona, nefa izany dia toy ny hoe mba hampisehoana azy ireo ny fomba ny fahavalony no ho tanteraka.
16:5 Ary noho izany, raha biby masiaka naharesy azy amin'ny fahatezerana, izy ireo nandringana noho ny kaikitry ny bibilava maditra.
16:6 Fa ny fahatezerany dia tsy maharitra mandrakizay, na toran-kovitra nandritra ny fotoana fohy ny fanitsiana, izy ireo dia mariky ny famonjena ho toy ny fahatsiarovana ny didin'ny ny lalànao.
16:7 Fa izay nitodika tany dia tsy sitrana ny zavatra hitany, afa-tsy amin'ny ianao, ny Mpamonjy rehetra.
16:8 Kanefa, na izany no nanambara tamin'ny fahavalonay fa ianao Izay manafaka amin'ny ratsy rehetra.
16:9 Fa izy no maty noho ny manaikitra ny valala sy lalitra, ary nisy tsy nahita vahaolana ny ainy, satria mendrika ny ho ringana amin'ny alalan'ny zavatra toy izany.
16:10 Kanefa na dia ny nifin'ny bibilava menarana resy ny zanakao, noho ny famindram-po dia tonga teny aminy ka nahasitrana azy.
16:11 Fa, ho fahatsiarovana ny teny, izy ireo ka nandinika voavonjy haingana, fa tsy fanadinoana sarin-javatra an-alitara ka tsy ho afaka ny hahazo ny fanampianao.
16:12 Ary, tokoa, na ny anana, na poultice, nahasitrana azy, fa ny teninao, Tompo O, izay manasitrana rehetra.
16:13 Fa Hianao ihany, Tompo O, izay mihazona ny herin'ny fiainana sy ny fahafatesana; ianareo samy hitondra any amin'ny tokonam-baravaran'ny fahafatesana sy ianao indray.
16:14 nefa, tokoa, mamono ny ainy noho ny lolompo, ary rehefa mivoaka ny fanahiny, dia tsy niverina, na no hiantso ny fanahiny, rehefa izany dia efa nahazo.
16:15 Saingy azo atao ny ho afa-mandositra ny tananao.
16:16 Fa ny ratsy fanahy, rehefa tsy nety mahafantatra anao, no nokapohina noho ny herin'ny sandrinao, maharitra amin'ny tsy mahazatra fanenjehana rano, ary ny havandra, rivo-mahery sy ny orana, ary ho levon'ny afo.
16:17 Fa nisy zavatra miavaka amin'ny rano, izay hamono ny zava-drehetra; izany no nahery kokoa noho ny afo; ho an'izao tontolo izao dia ny mpiaro ny marina.
16:18 Tokoa, amin'ny sasany ny fotoana, ny afo dia resy, mba tsy handoro mampiala maina ny biby, izay irahina hamely ny ratsy fanahy; ary mba, in nahita izany, mba ho fantany fa mijaly izy ireo fanenjehana noho ny fitsaran'Andriamanitra.
16:19 Ary, amin'ny fotoana iray hafa, afo nirehitra,, mihoatra noho ny azy hery, ao anatin'ny rano, Ary nirehitra niakatra avy manodidina, mba handringana ny firenena iray tsy ara-drariny tany.
16:20 Fa tsy ireo zavatra ireo, ianao namahy ny olona ny sakafo ny anjely, ary, rehefa voaomana mofo avy any an-danitra, no nanompo azy tsy misy asa izay mihazona ao tenany mahafinaritra rehetra sy ny mamy rehetra tsirony.
16:21 Fa ny toetra nasehony ny mamy, izay mihazona ao an-lahy, sy ny fanompoana ny sitrapon'ny tsirairay, dia niova fo izay nisafidy ny tsirairay.
16:22 Fa ny oram-panala sy ny ranomandry natao indray ny herin'ny afo, Ary tsy ketraka, ka dia mba ho fantany fa afo, nandoro tao ny havandra ary manelatselatra ao amin'ny orana, nanimba ny vokatry ny fahavalo.
16:23 Nefa izany koa no nitranga, ka ny olo-marina mba ho voafahana, fa ny afo mihitsy aza no omena ny hery manokana.
16:24 Fa ny biby manompo anao, ny Mpamorona, mitombo mena mafana eo teo amin'ny ady manohitra ny tsy marina, nefa izany ny fanampian'ny ho tombontsoan 'ireo izay matoky anao.
16:25 Noho io, ary tamin'izany andro izany, rehefa avy niova tarehy ny zava-drehetra, ny fahasoavana dia naha tsara ny nursemaid ny zava-drehetra, araka ny sitrapon 'ireo izay maniry ho anareo,
16:26 ka ny zanakao, izay tia, Tompo O, mba hahafantaranao fa tsy ny vokatry ny natiora izay homana olona, fa ny teninao, izay miaro ireo izay mino anao.
16:27 Fa izay tsy ho ringana amin'ny afo, levona ireny avy hatrany rehefa faly ny vitsivitsy tara-masoandro,
16:28 mantsy izy, mba ho mazava amin'ny rehetra fa zo ho tonga eo anatrehanao ny masoandro mba hitso-drano anao, ary mankafy anareo tamin'ny mbola nazava ratsy ny fahazavana.
16:29 Fa ny fanantenana ny mankasitraka dia levona tahaka ny ririnina, ary ny ranomandry dia hampihahaka ny rano toy ny firehetan'ny.
17:1 Fa ny didim-pitsaranao, Tompo O, lehibe, ary ny teny tsy hay lazaina. Noho izany, Mirenireny fanahy tan-dalàna no lalan-diso.
17:2 Fa, raha niezaka handresy lahatra ny tsy marina, mba hahazoana hanjaka amin'ny firenena masina, Nasian'izy ireo gadra vy izy ireo dia tamin'ny gadra maizina sy tsy misy farany ny alina, fonosina ao anatin'ny an-tranony, mpandositra avy amin'ny fitondran'Andriamanitra mandrakizay, ambany rava.
17:3 Ary, raha mbola nieritreritra ny ho afa-mandositra izy ireo filazana ao amin'ny miafina fahotany, dia niely ny maizina ambanin'ny voaly fanadinoana, satria raiki-tahotra mahatsiravina, ary rehefa sahiran-tsaina be fahatalanjonana.
17:4 Fa tsy nanao ny zohy izay fonosina azy ireo hiaro azy ireo tamin'ny tahotra, satria nidina feo tsaina azy ireo, ary ny alahelo olona niseho ho azy ireo nanamafy ny tahotra.
17:5 Ary, tokoa, na dia tsy nanana hery afo mba hanome azy ireo fahazavana, ary tsy afaka ny lelafo mazava ny kintana manazava fa mahatsiravina alina.
17:6 Na izany aza niseho taminy tampoka afo, raiki-tahotra; ary, rehefa namely misy ny fahatahorana an'i fa tarehy izay tsy hita maso, dia nandinika ireo zavatra izay izy ireo dia jereo ny ho ratsy,
17:7 ary, rehefa baraka, ny tanteraka akory dia nesorina tao ny kanto miaraka amin'ny ny teny mafy ny manana voninahitra contemptuous fahendrena.
17:8 Tokoa, ireo izay nampanantena fa Mandroaka ny tahotra sy tabataba avy amin'ny fanahy hitsaboana, na dia feno fihomehezana, no tena Nijaly noho ny tahotra.
17:9 Ary, voajanahary na inona na inona na dia sahiran-tsaina izy ireo, tsy mbola nitebiteby noho ny fandehan'ny ny biby sy ny zavatra mampisitrisitra ny bibilava, dia maty noho ny tahotra, mandà ny zavatra hitany izy ireo na dia eny amin'ny rivotra, izay tsy mieritreritra ny ho afaka ho afa-mandositra.
17:10 Fa, raha mbola hisy ahiahy amin'ny ratsy, fijoroana ho vavolombelona dia manome ho fanamelohana, fa ny hoe enjehin'ny eritreritra foana fatratra vinavina.
17:11 Noho ny tahotra dia zavatra hafa, fa nivadika ny mieritreritra zavatra mahasoa.
17:12 Ary, raha fanantenana no noroahina avy ao, ny anton 'izany dia satria nataony fa ny iray malaza eo amin'ny fahalalana, ary vokatr'izany, ady mihoatra noho ny fahalalana.
17:13 Kanefa ireo izay tena nanan-kery ny alina, rehefa resin'ny na ny vilest sy ny lalina indrindra helo, natory ny torimaso ihany,
17:14 indraindray namporisika ny tahotra ny zavatra tsy voajanahary, fotoana hafa hilentika teo amin'ny fahafaham-baraka ny fanahy, ho tampoka sy tsy nampoizina ny tahotra naharesy azy.
17:15 Avy eo, raha misy eo efa nahazo azy izy, dia foana tao am-ponja tsy misy bara izay efa sisa misokatra.
17:16 Fa raha misy tantsaha, na ny mpiandry ondry, na ny mpiasa ao amin'ny sehatry ny asa dia tampoka handresy, Niaritra ny tsy azo ialana dia ilaina.
17:17 Fa izy rehetra niara-nafatotra tamin'ny rojo anankiray amin'ny haizina. Ary raha misy nisioka rivotra, na ny mamy feo ny vorona eny amin'ny sampany ny hazo misandrahaka, na ny herin'ny rano rivotra loatra,
17:18 na ny feon'ny vato mahery nidona teo, na ny fampielezana ny playful biby rehefa hita, na ny mahery feo bellowing biby, na ny manakoako ny tendrombohitra avo indrindra RuNet, ireo zavatra ireo dia nahary azy ho eo hihena noho ny tahotra.
17:19 Fa izao tontolo izao dia mazava hihazavany amin'ny fahazavana, ary tsy nisy ho voasakana ny asany.
17:20 fa avy eo, ny mavesatra alina napetraka noho ny masoandro ho azy ireo, ny sary izany haizina, izay efa handresy azy ireo. Kanefa izy ireo sarotra kokoa ny tenany noho ny haizina.
18:1 Fa ny olo-masina dia ny fanazavana lehibe indrindra, ary nandre ny feonao, nefa tsy mba nahita ny teny. Ary satria izy ireo tsy mitovy koa ny miaritra ny zava-, dia nidera anao indrindra.
18:2 Ary ireo izay naratra teo anatrehan'i, nony efa nisaotra, satria intsony rehefa naratra, ary satria efa nangataka izany fanomezana, fa hisy izany fahasamihafana.
18:3 Noho io, izy ireo nanana ny afo mirehitra tsanganana toy ny mpitari-dalana eo amin'ny fomba tsy fantatra, ary nasehony ny masoandro mampidi-doza ny tsara mandray vahiny.
18:4 ny hafa, tokoa, mendrika ny omena ny mazava sy hiaritra ny am-ponja 'ny haizina, izay nijery ho afaka managadra ny zanakao, Izay ny tsy mety lo fahazavan 'ny lalàna dia nanomboka homena ny taranaka ho avy.
18:5 Rehefa nieritreritra ny hamono ny zaza 'ny marina, lahy iray rehefa hita sy afaka, ny fahafaham-baraka, ianao efa nalain'i maro be ny zanany ka nandringana azy rehetra miaraka ao anaty rano mahery.
18:6 Fa ny alina dia fantatra mialoha ny razantsika, amin'izay mba, mahalala ny fahamarinana 'ny fianianana izay efa nitokiany, mba ho milamina kokoa ny fanahiny.
18:7 Kanefa ny olona tsy nandray ny famonjena ny marina, fa koa ny fandringanana ny tsy ara-drariny.
18:8 Fa toy ianao naratra ny fahavalonay, toy izany koa no hihevitra indrindra miantso antsika nivoaka.
18:9 Fa ny marina zanaky ny hatsaran-toetra dia mangingina fanatitra sorona, sy araka izay sitraky ireo itantanana ny lalàn'ny fahamarinana, ka na tsara sy ny ratsy dia ho afaka ny hahazo ny rariny, ary mba mety izao mankasitraka ny mihiaka amin'ny Ray.
18:10 Etsy ankilany, nisy feo dissimilar dia manakoako avy amin'ny fahavalo, ary ny malahelo dia re fisaonana ho an'ny ankizy izay rehefa niantso ny.
18:11 Fa ny sazy toy izany koa nampahory ny mpanompony amin'ny tompony, ary ny olon-tsotra niaritra izany hoe ny mpanjaka.
18:12 Noho izany, rehetra dia iray ihany, amin'ny anarana iray ho an'ny maty, ary ny maty dia tsy hita isa. Fa na dia velona ampy handevina ny maty, satria, amin'ny ezaka iray, ny tena miavaka dia nandringana firenena.
18:13 Fa izy ireo dia tsy nety nino na inona na inona noho ny zava-mahadomelina; Ary tena, amin'ny voalohany, raha ny fandringanana ny lahimatoa nitranga, dia nampanantena ny olona dia an'Andriamanitra.
18:14 Fa, rehefa milamina ny zava-drehetra nanodidina fahanginana, ary rehefa tonga ny Mazava ho azy fa ny alina dia nandeha ny afovoan'ny ny dia,
18:15 ny mahefa ny teny avy any an-danitra niantoraka teo amin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka, ho toy ny mpiady masiaka eo amin'ny tany ny famonoana,
18:16 toy ny sabatra maranitra ny tsy mihatsaravelatsihy nitondra fahefana, ary mitsangana, feno ny zava-drehetra amin'ny fahafatesana, ary, dia nitsangana teo amin'ny tany, nahatratra ny lalana rehetra niakatra ho any an-danitra mikasika.
18:17 Avy eo, tapaka fahitana ny nanonofy ratsy tsaina azy ireo, ary tsy nampoizina tahotra naharesy azy ireo.
18:18 Ary nisy iray koa nazera any an-kafa antsasaky ny velona; ary noho izany, tamin'ny alalan'ny izay efa maty, ny antony mahatonga ny fahafatesana dia nambara.
18:19 Fa ny fahitana izay efa nampitandrina azy ireo sahiran-tsaina izany zavatra izany, fandrao ho very sy tsy mahalala ny antony nijaly tamin 'ireo ratsy.
18:20 Na izany aza, tamin'izany fotoana izany, ny fizahan-toetra ny fahafatesana dia nikasika ny marina, ary nisy fanelingelenana ny vahoaka tany an-efitra, fa ny fahatezeranao tsy mbola ho ela.
18:21 Fa ny tsy manan-tsiny ny olona, miroborobo, dia ho nangataka ho an'ny olona, mamoaka ny ampingan'ny ny fanompoana, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny ditin-kazo manitra, manao vavaka fitalahoana, dia mahatohitra tezitra, ary toy izany koa mametraka hampitsahatra ny ilaina fahasahiranana, manambara fa Izy no mpanomponao.
18:22 Kanefa outlasted ny korontana, fa tsy amin'ny hatsaram-panahy momba ny tena, na an-keriny ny fitaovam-piadiana, fa, tamin'ny teny, efa resiny ireo izay mampitabataba azy, fahatsiarovana ny fianianana sy ny fanekempihavanan 'ny ray aman-dreny.
18:23 Fa raha izy ireo izao hikarapoka ho faty ny korontam-bato mifanindry, dia nitsangana teo anelanelan'i izy ireo, ary notapahiny ny fanafihana, ary nozarainy ireo izay nifehy ny lalana ho velona.
18:24 Fa, ao anatin'ny akanjo ny henatra izay natao, izao tontolo izao dia miara rehetra, ary ny lehibe asa ny ray aman-dreny dia voasokitra amin'ny efatra baiko-bato, ary ny voninahitra dia voasoratra teo amin'ny tampon-dohany.
18:25 Nefa izy no ilay nanolotra haringana izy ireo na dia ho raiki-tahotra. Voalohany fitsarana ny fahatezerana dia ampy.
19:1 Fa ny ratsy fanahy, ny làlana mankany amin'ny tena farany, dia resin'ny fahatezerana tsy misy famindram-po. Tokoa, fantany rahateo aza ny hoavy.
19:2 Na izany aza, satria izy ireo mety ho nibebaka, ka ho tarihin'ny Azy mba ho nirahina be fiahiana, ny olo-marina ny ratsy fanahy nitady, raha manenina ny asany.
19:3 Fa, raha ny marina dia mbola mitana alahelo an-tànany sy nitomany teo amin'ny fasan'ny maty, ireo olon-kafa teo amin'izy ireo eritreritra tsy misy antony iray hafa, dia nandroaka ny mpanao lalàna, ary nanenjika azy izy ireo toy ny hoe afa-mandositra.
19:4 Fa ny mety ilaina dia nitarika azy ireo ho any izany no, ka dia very ny fahatsiarovana ireo zavatra izay efa nitranga, ka ny zava-tsy ampy amin'ny fijalian'i ny ady mety ho vita ny sazy,
19:5 ary toy izany koa fa ny olona, tokoa, Mety mahatalanjona handeha hamaky, fa izao kosa no olon-kafa mety hahita fahafatesana vaovao.
19:6 Fa ny zavatra rehetra araka ny karazany avy dia nanisy endrika izao indray toy ny hatrany am-piandohana, mazoto manompo ny fampianarana, ka ny zanakao no ho voaro soa aman-tsara.
19:7 Fa nisy rahona nanarona ny tobiny, ary izay rano teo anoloan'ny, niseho tany maina, sy teo amin'ny Ranomasina Mena, lalana sady tsy nisy fanakantsakanana, ary avy ao amin'ny lalina indrindra, ny ambaratonga saha mipoipoitra,
19:8 ny alalan 'izay ny firenena iray manontolo no lasa, miaro ny tananao, nahita ny fahagagana sy zava-mahagaga.
19:9 Fa levona toy ny soavaly sakafo, dia niantoraka toy ny zanak'ondry, midera anao, Tompo O, izay efa nafahana azy.
19:10 Fa izy ireo dia mbola nahatsiaro izay zavatra nitranga nandritra ny fotoana ny-tany, Ahoana, fa tsy omby, ny tany naniry lalitra, ary ho solon'ny hazandrano, manandrata ny ony ny sahona maro be.
19:11 Ary, Farany, dia nahita karazana vorona vaovao, rahoviana, tarihin'ny ny faniriany, izy ireo nitaky ny andro firavoravoana amin'ny hena.
19:12 Fa, mba hitsapa alahelo ny very, ny papelika niakatra ho azy ireo avy any an-dranomasina, nefa olana naharesy ny mpanota, na dia tsy tsy misy ny porofo ny zava-nitranga rahateo ny herin'ny tselatra, fa araka ny rariny nijaly noho ny faharatsiany.
19:13 ary tokoa, dia hanorina maharikoriko kokoa inhospitality. tokoa, ny sasany tsy nety nandray vahiny tsy fantatra, fa izao kosa no sasany fandrafetana vahiny tsara ho fanandevozana,
19:14 ary tsy vahiny, fa koa ireo izay efa eo ambany ny fikarakarana, satria tsy fidiny sheltering ny vahiny.
19:15 Kanefa na iza na iza dia voaaro azy tamin-kafaliana, amin'ny alalan'ny fanaovana fampiasana ny tena rariny ihany, nampahoriany tamin'ny alahelo mafy indrindra.
19:16 Anefa izy ireo jamba, toy ny olona nentina teo anoloan 'ny vavahadin' ny rariny, ka izy ireo tampoka voasaron'ny aizina, ary samy no sisa nitady ny tokonam-baravaran'i ny varavarana fidirana.
19:17 Fa ny zavatra tao amin'ny tenany ao amin'ny dingan'ny raha ovana, toy ny rehefa ny feon'ny zava-maneno dia efa niova ny toetry amin'ny kalitao, nefa samy mitandrina ny tenany feo, avy aiza no heverina ho sy araka ny raikitra tarehy.
19:18 Fa ny ambanivohitra dia niova amin 'ny rano, ary ny zavatra izay efa milomano, tafita ny tany.
19:19 Afo naharesy teo afovoan'ny rano, mihoatra noho ny azy hery, ary ny rano quenching hadinony ny natiora.
19:20 Etsy ankilany, ny lelafo tsy olana ny fatin'ny biby eto an-tany mandeha manodidina, na izy ireo ketraka fa tsara sakafo, izay toy ny mora miempo toy ny ranomandry. Fa ny zava-drehetra, Tompo O, ianao nankalaza ny olonao, ary nanaja azy, ka dia tsy hanao tsinontsinona azy, fa isaky ny fotoana sy amin'ny toerana rehetra, no nanampy azy ireo.